Sida loo soo jiito: talooyinka iyo tabaha ugu fiican | Ragga Caqliga leh
Jarmal Portillo | 05/08/2021 10:45 | Lamaanaha iyo Galmada
Qof kastaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ay go'aamiyaan hiddo -wadayaasha mid kasta. Maskaxda ku hay in ay jiri doonaan dad aad noo jecel iyo kuwo kale oo inaga jecel wax yar. Si kastaba ha ahaatee, xittaa wax kasta oo hidde ah oo laga yaabo, waan ka faa'iidaysan karnaa haddii aan naqaan sida hubkayaga si wanaagsan loo isticmaalo. Rag badan ayaan si fiican u aqoon sida loo soo jiito waxayna aakhirka ku khasaariyaan weji wanaagsan ama jidh wanaagsan.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan kuugu sheegno waxa ay yihiin talooyinka iyo tabaha ugu fiican ee lagu barto sida loo soo jiito.
1 Sida loo soo jiito
2 Leh jidh wanaagsan iyo kaftan
3 Nadaafadda jirka si aad u barato sida loo soo jiito
4 Talooyinkii ugu dambeeyay
Waxaa jira waxoogaa talo ah oo laga bixiyo dhinaca cilmiga, mar haddii la caddeeyey. Tusaale ahaan, waxaa aad u wanaagsan in aad u bislaato mar haddii dumarka badankoodu jecel yihiin in ay weynaadaan. Dumarka ayaa soo jiita ragga waaweyn marka ay gaaraan madaxbannaanida dhaqaalaha. Daraasadaha qaarkood waxay ku xiraan awoodda. Tan waxaa kale oo garwaaqsada dadka leh heer nololeed oo sarreeya, sidaa darteed waxay kaloo noqon doontaa soo jiidasho heer sare ah. Waxaa laga yaabaa in baabuur qaali ah ama guri raaxo leh uu soo jiidan karo haweeney.
Inaad noqoto qof fiican waxay wax weyn ka tari kartaa barashada sida loo soo jiito. Waxay la xiriirtaa jirkaaga iyo shakhsiyadda aad leedahay. Dadka badankiisu waxay qirtaan inay helaan ragga leh astaamaha noocyadooda soo jiidashada badan. Waxaana loogu yeeraa saamaynta halo. Taas micnaheedu waa in hal sifo u adeegto si qof u sameeyo sawir buuxa oo naftaada ah. Waxaa cad in aad wax badan ka eegi karto dumarka haddii aad tahay nin wanaagsan.
Garku waa qayb muhiim u ah barashada sida loo soo jiito. Waa gunaanad aan innaga yaabin. Haddii haweeney la siiyo kala doorasho dhowr nin oo kaliya iyadoo fiirineysa jirkooda, waxay u badan tahay inay ku saleysan tahay xulashada kuwa leh gar-maalmeedyo badan. Waxay u janjeeraan inay xoogga saaraan xiirashada iyo quruxda wejiga. Sidoo kale waa inaan maanka ku hayaa inay jiraan siyaabo badan oo loo beero gadhka oo ay jiraan qaar ka soo jiidasho badan kuwa kale.
Leh jidh wanaagsan iyo kaftan
Waxaad dhihi kartaa waa inaad jirka ka shaqaysaa laakiin aad uma badna. Dumarku waxay doorbidaan ragga muruqa xiriirkooda gaaban iyo ragga caatada ah ee xiriirka dheer. Lama oga inay tahay hadhaagii cilmiga dadka ee maalmaha ugaarsigaaga ama ay la xiriirto bacriminta iyo kobcinta.
Dareenka kaftanku ma aha hal -ku -dheg. Haddii aad ka qosliso qofka aad jeceshahay, waxaa u sahlan in xiriirka labada qof uu horumaro. Caadi ahaan waa arrin xiiso leh oo aan ku habboonayn dumarka marka loo eego ragga. Caadi ahaan raggu waxay xoogga saaraan muhiimadda ay leedahay awooddooda gaarka ah si ay u yeeshaan dareen kaftan la'aan ah. Dumarku waxay doorbidaan ninka ka qosliya.
Bani -aadamnimadu waxay noqon kartaa talo yaab leh laakiin ansax ah. Taasi waa, nin kaliya ma noqon karo mashiin aan lahayn dareen ama inuu galo aad u adag. Ka hadalka dareenka ayaa fure u ah barashada sida loo soo jiito. Baadhitaan Australia ah ayaa awooday inuu bixiyo macluumaad ku saabsan raggaas oo muujiya garaadka dareenka. Taas macneheedu waxa weeye raggaas waqti fudud u qaata dareenkooda oo awood u leh inay ka hadlaan ayaa soo jiidasho leh. Raggaan ayaa badanaa soo jiita dumarka.
Nadaafadda jirka si aad u barato sida loo soo jiito
Nadaafadda jirka iyo muuqaalka waa arrin aad muhiim u ah. Udgoonka wanaagsani waa wax iska cad, laakiin kuma filna haddii aadan lahayn ur jidheed oo kicisa dareenka qarsoon. Waad isticmaali kartaa cadarro iyo cadarro aad u daran oo kaa dhigaya kuwo soo jiidasho iyo kalsooni badan leh. Caadiyan waa inaad isku daydaa inaad hesho cadar ama barafuun ku habboon shakhsiyaddaada.
Luqadda jirku waxay kaloo noqon kartaa hub wanaagsan. Waa inaad daryeeshaa luuqadda jirka oo aad muujisaa, taasoo muujinaysa inaad naftaada ku kalsoon tahay. Guud ahaan, dad isku kalsoon oo sheekadooda ku saleeya luqadda jirku waxay sidoo kale heshaa faa'iido marka shukaansiga. Dumarku waxay doorbidaan isku -dheelitirnaan ballaadhan sida gacmo la'aan ama wax uun. Waa inaadan gacmahaaga isku dhaafin maadaama aysan ahayn wax dhaldhalaalaan oo waxay kaa dhigaysaa mid u muuqda inaadan rabin inaad bilowdo wada hadal.
Inaad noqoto qof togan oo isku kalsoon ayaa qayb ka ah shakhsiyadda qof walba. Waxaa jira dad aan kalsooni badan qabin iyo kuwo kale oo aan sidaa u fiicnayn. Si kastaba ha ahaatee, haweenku inta badan waxay doortaan kuwa waxay isku kalsoonaadaan oo ku fiican yihiin xaaladaha adag. Haddii aad leedahay dhinacaaga togan oo aad xoojiso oo aad ku faanto guulahaaga, waxaad heli doontaa dhibco badan.
Mid ka mid ah gabagabada laga soo qaatay daraasado badan ayaa muujinaya in taageeriddu ay noqon karto hub weyn oo lagu barto sida loo soo jiito. Mid ka mid ah astaamaha ay ragga iyo dumarkuba aad ugu qaddariyaan cilaaqaadka waarta waa in aad dadka u muujisaan midnimo.
Dharku wuxuu noqon karaa qaboojiye. Dharka guduudan wuxuu noqon karaa mid aad u soo jiidasho leh in kasta oo aan gebi ahaanba lagu guulaysan. Sababtoo ah dhadhanka haweeney kasta ayaa laga yaabaa inay ka duwan tahay. Haddii aad haysato xayawaan rabaayad ah waxaa laga yaabaa inaad wax ka qabato jidka. Waana mid ka mid ah astaamaha ugu badan ee aadamnimada u yeelata ragga loo arko inay yihiin kuwo qallafsan waa jiritaanka xayawaanka rabaayada ah ee noloshaada. Waxay kuu soo saari karaan waxa kuugu fiican, dhinacaaga ugu damqashada badan iyo jaceylka dabeecad ahaan. Dhibcahaan oo idil dhibco ayay la leeyihiin dumarka.
Talooyinkii ugu dambeeyay
Kuwani waxtar yar bay leeyihiin, laakiin waxay kuxirantahay qofka aad la joogto waxay noqon kartaa wax aad u yaab badan. Mid ka mid ah ayaa ku dhaqma isboortiga xad -dhaafka ah. Isboortiga aadka u daran ayaa soo jiita dumarka maadaama ay u arkaan inaad si fiican u maareyn karto halista. Wax walba waa laga soocay nolosha shaqsiyeed.
Ugu dambeyntii tusi nabarradaada. Xitaa haddii aad barar ku leedahay garkaaga markii aad ku dhacday baaskiilkaaga, ka sheekaynta arrinta iyo isticmaalka xoogaa qosol leh waxay noqon kartaa hab aad u qosol badan oo aad naftaada ugu qosli karto. Tani caadi ahaan caafimaad bay leedahay cilaaqaadyo badan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo soo jiito.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo soo jiito
Marka haweeneydu kuu sheegto waxyaalaheeda